Ireo nomena fotoana ny 18 novambra dia nasaina niverina ny 25 novambra saingy tsy voaray ihany fa mbola nahemotra ho amin’ny fotoana manaraka indray ; dia toy izany avokoa ny daty rehetra.
Ny talata 26 novambra dia efa naato ny fakana sary tao amin’ny CIM (Centre Immatriculateur de Madagascar) Ambohidahy-Antananarivo noho izay olana izay, ary fantatra ihany koa fa voakasiky ity fiatoana ity ihany koa ny taratasin’ny fiarakodia.
Nambaran’ireo sekoly mampianatra mamily fiara fa tsy nampandrenesina nialoha izy ireo ka nidirana fatiantoka goavana ny fitondrana ireo mpianatra saika entina haka sary tany Antananarivo, izay niverim-potsiny avokoa.
Tamin’ny 24 mey 2019 no nanaovan’ny fitondrana mijoro ankehitriny serasera be fa dia manara-penitra tanteraka manomboka izao ny fanaovana biometrika ny fahazoan-dalana hanamory fiara sy taratasin’ny fiara rehefa nahita mpiara-miombon’antoka vaovao, taorian’ny nanilihana ny CETIS Madagascar, orinasa nisahana ny famoahana io biometrika io nandritra ny telo taona sy tapany.
Mitranga ankehitriny ny olana : ara-pitaovana tokoa sa resa-bola tsy voaloa no antony ?